Qaraxyo Xoogan Oo Shisheeyaha Lala Beegsaday. – Bogga Calamada.com
Qaraxyo Xoogan Oo Shisheeyaha Lala Beegsaday.
December 28, 2016 2:03 pm Views: 8
Wararka ka imaanaya degmada Jalalaqsi ee gobalka Hiiraan waxey sheegayaan in gudaha degmadaasi laga maqlay qarax culus kaasi oo faahfaahino dheeraad ah ay kasoo baxayaan.
Qaraxa oo loo adeegsaday miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago ayaa lala beegsaday askar ka tirsan ciidamada dowlada Ridada Jabuuti kuwaasi oo miinada loogu aasay goob ay maalin walba fadhiistaan oo ku taala dhanka Galbeed ee degmada Jalalaqsi.
Dhawaaqa qaraxa waxaa si aad ah looga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmada Jalalaqsi’iyadoona qaraxa kadib ciidamada Jabuuti ay jareen isgaarsiintii degmada taasi oo muujineysa in khasaara nafeet ciidamada Jabuuti lagu gaarsiiyay qaraxaasi.
Dhanka kale kolanyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Burundi ayaa qarax culus lagula beegsaday inta u dhaxeysa deegaanada Biyo cadde iyo Miir-taqwa oo wada hoostaga degmada Mahadaay ee gobalka Shabeelada dhexe.
Qaraxa miino ayaa la xaqiijiyay inuu haleelay gaari Beebo ah kaasi oo gabi ahaan burburay’waxaa sidoo kale qaraxa lagu dilay shan askari oo Burundeys ah hal askari waa laga dhaawacay askarta Burundi.
Kolanyada Shisheeyaha ayaa si aad ah ugu dhib qaba isticmaalka wadada isku xirta deegaanada Biyo cadde iyo Miir-taqwa’iyadoona todobaadkan aysan jirin maalin shisheeyaha qarax lagula beegsan wadadaasi.